Degso Taxi Simulator 2018 APK loogu talagalay Android
Degso Taxi Simulator 2018
Bilaash Degso loogu talagalay Android (341.00 MB)
Degso Taxi Simulator 2018,
Taxi Simulator 2018 waa ciyaarta jilitaanka taksi ee ugu fiican oo aad ka soo dejisan karto kuna ciyaari karto taleefankaaga Android lacag laaan. Soosaarka, oo ka sarreeya ciyaaraha kale ee jilitaanka taksi ahaan xagga sawirrada iyo ciyaarta ciyaarta, waxaa soo saaray Ciyaaraha Zuuks, oo aan ku naqaanno Truck Simulator 2017 iyo Ciyaaraha Wadista Magaalada.
Waxaan ku wadi karnaa 8 taksi oo kala duwan ciyaarta jilitaanka taksiga oo la socota taageerada luqadda Turkiga. Dabcan, waxaan ku warwareegnaa magaalada, annaga oo soo qaadnay rakaabka, u kaxaynayna meel kasta oo ay doonaan oo lacagteenna ka qaadanayna, laakiin si xor ah uma dhex mushaaxno. Waxaan haynaa 250 cutub si aan u dhammaystirno. Maadaama ciyaartu tahay af Turki, waxaan u malaynayaa inaad si fudud u dhammayn karto cutubyada.
Waxaan fursad u leenahay inaan kula tartano ciyaartoy kale ciyaarta jilitaanka, halkaas oo aan ahayn taksi kaliya laakiin sidoo kale rakaabka iyo moodooyinka magaalada ay yihiin kuwo tayo sare leh. Lahaanshaha nidaamka taraafikada nolosha dhabta ah ayaa sii adkeynaya caqabadda.
Taxi Simulator 2018 Noocyada
Cabirka Faylka: 341.00 MB
Horumar: Zuuks Games